၂၀၁၀ – ဧရာဝတီအတွက် စိန်ခေါ်မှုတွေများတဲ့ နှစ်တနှစ် | Ko Oo + Ma Thandar
« လှပစွာ သဘောထားကွဲကြပါစို့
၂၀၁၁ မှာ သူတို့ ဘာတွေလုပ်ကြမလဲ »
ထက်အောင်	Thursday, 30 December 2010 15:38 – ဧရာဝတီ
သတင်းစာ လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ ဒီမိုကရေစီကို ယုံကြည်တဲ့ ပြည်ပအခြေစိုက် မြန်မာသတင်းမီဒီယာ တခုအနေနဲ့ ဧရာဝတီ မဂ္ဂဇင်းရဲ့ ဖြတ်သန်းမှုမှာ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ စိန်ခေါ်မှုကြီးတွေထဲက တချို့ကို ၂၀၁၀ နှစ်မှာ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒီနှစ်ဟာ နှစ် ၂၀ အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမဆုံးအကြိမ် ရွေးကောက်ပွဲများကျင်ပတဲ့ နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီဆီ ဦးတည်တဲ့ တဖြည်းဖြည်း ပြောင်းလဲရေးရဲ့ ခြေလှမ်းတခုလို့ပဲ မြင်မြင်၊ လက်ရှိစစ်အစိုးရက မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ စစ်တပ်ကြီးစိုးရေးအတွက် ကြိုးစားမှုတခုသာ ဖြစ်တယ်လို့ပဲပြောပြော ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာ မြန်မာ့သမိုင်းမှာ အရေးကြီးတဲ့ဖြစ်ရပ် တခုအနေနဲ့ ကျန်ရှိခဲ့လိမ့်မယ်ဆိုတာကို ကျနော်တို့ ကောင်းကောင်း သတိပြုမိခဲ့ပါတယ်။
ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာ သာမန် နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတခု၊ ရွေးကောက်ပွဲနေ့တနေ့ကို သတင်းပေးပို့တာထက် ပိုတယ်ဆိုတာကိုလည်း ကျနော်တို့ သတိပြုမိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲအကြိုကာလတွေမှာ ဘာတွေ ဖြစ်ပျက်နေတယ်ဆိုတာကို ဧရာဝတီ စာဖတ်သူတွေ ပြည့်ပြည့်၀၀ နားလည်သိရှိနိုင်ဖို့အတွက် ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတွေကို စောစောပိုင်း ကတည်းက ကျနော်တို့ အာရုံစိုက် သတင်းပေးပို့ခဲ့ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတဲ့နေ့ မတိုင်ခင် ၁ နှစ်ကျော်ကျော်လောက် ကတည်းက ဧရာဝတီက “ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်ရေး” (Election Watch) ကဏ္ဍသစ်ကို ၂၀၀၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလမှာ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၀ ခုနှစ် မတ်လရောက်တဲ့အခါမှာ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ သတင်းတွေ၊ သုံသပ်ချက်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်ခန်းတွေကို စာဖတ်သူများအနေနဲ့ စာမျက်နှာတခုတည်းမှာ စုစုစည်းစည်း ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်အောင် “၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် မြန်မာပြည်” ဆိုတဲ့ စာမျက်နှာသစ်ကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီစာမျက်နှာမှာ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ နောက်ဆုံးသတင်းများ၊ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေများကို သုံးသပ်ချက်များ၊ နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုများ၊ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ မသမာမှုများကို ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
နှစ်ပေါင်း ၂၀ အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမဆုံးကျင်းပတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်သလို ဧရာဝတီရဲ့ ၁၇ နှစ် သက်တမ်းအတွင်း ပထမဆုံးကြုံတွေ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်တခုလုံးကို သတင်းပေးပို့ရတဲ့ မြန်မာသတင်း သမားတွေမှာ အဲဒီလို အတွေ့အကြုံမျိုး ယခင်က လုံးဝမရှိခဲ့တာကို ထည့်သွင်းစဉ်းစာကြည့်မယ်ဆိုရင် ဒါဟာ ထူးခြားတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတခု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်လည်း ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်တွေကို ကျနော်တို့ကိုယ်တိုင် သိနားလည်နေအောင်နဲ့ မြန်မာ့ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့သလဲဆိုတာတွေကို ကမ္ဘာကို သတင်းပေးပို့နိုင်ဖို့အတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်နေအောင် ကျနော်တို့ရဲ့အားထုတ်မှုတွေကို နှစ်ဆတိုးဆောင်ရွက်ခဲ့ရပါတယ်။
ဧရာဝတီ အယ်ဒီတာအဖွဲ့ရဲ့ ခိုင်မာတဲ့မူဝါဒတွေနဲ့ သတင်းခန်းတခုလုံးရဲ့ အားကောင်းတဲ့ အဖွဲ့လိုက်ဆောင်ရွက်တတ်တဲ့ စိတ်ဓာတ်ကြောင့် ကျနော်တို့ မျှော်မှန်းချမှတ်ခဲ့တဲ့ လုပ်ငန်းတွေအားလုံးနီးပါးကို အောင်အောင်မြင်မြင် လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရွေးကောက်ပွဲကို စောင့်ကြည့်လေ့လာကြမယ့် ကျနော်တို့နဲ့ ဦးတည်ချက်ခြင်းတူတဲ့၊ ပိုပြီးလည်းအတွေ့အကြုံများတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေဆီကနေ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ဆိုင်တဲ့ အရေးကြီးသော စွမ်းရည်မြှင့်တင်မှုဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေကို ရှာဖွေဆည်းပူးမှု မလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင် ကျနော်တို့ရဲ့ အားထုတ်မှုတွေ ဘယ်လောက်ပဲကောင်းကောင်း ကျနော်တို့ရဲ့တာဝန်ကို ပြည့်ပြည့်၀၀ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဘန်ကောက်မှာ အခြေစိုက်တဲ့ Asian Network for Free Elections (ANFREL) လို့ခေါ်တဲ့ အာရှဒေသတွင်း ရွေးကောက်ပွဲတွေကို စောင့်ကြည့်လေ့လာနေတဲ့ လွတ်လပ်သော ရွေးကောက်ပွဲလေ့လာစောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့ကြီးဆီကနေ ကျနော်တို့လိုအပ်နေတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ လေ့လာဆည်းပူးမှုတွေ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တာဟာ အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အချက် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အာရှဒေသတွင်း နိုင်ငံတွေက လွတ်လပ်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာရေး အဖွဲ့တွေ စုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ANFREL ဟာ ဒေသဆိုင်ရာအဆင့် တခုထဲသော အဖွဲ့ကြီးအဖြစ် ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှာ စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ဒေသတွင်း လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတွေ ပေါ်ပေါက်ဖို့ တက်တက်ကြွကြွကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ အဖွဲ့ဖြစ်သလို ရွေးကောက်ပွဲတွေကို စောင့်ကြည့်လေ့လာတဲ့ တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်း သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကို အခမဲ့ရက်ရက်ရောရော မျှဝေပေးတဲ့ အဖွဲ့အစည်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အမိမြန်မာပြည်က ရွေးကောက်ပွဲကို သတင်းပေးပို့နိုင်ဖို့အတွက် ပြင်ဆင်တဲ့နေရာမှာ ဒေသတွင်း ရွေးကောက်ပွဲ အတွေ့အကြုံတွေဟာလည်း အထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့ ယုံကြည်တဲ့အတွက် ဒီနှစ်အစောပိုင်းမှာ သီရိလင်္ကာနဲ့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွေ မှာကျင်းပတဲ့ ပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲတွေကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သွားရောက်လေ့လာ သတင်းပေးပို့ဖို့အတွက် ကျနော်တို့ရဲ့ သတင်းထောက်တွေကို စေလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီလို သတင်းထောက်တွေရဲ့ စွမ်းရည်မြှင့်တင်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေက များပြားတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကို ယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ ရင်ဆိုင်နိုင်အောင် ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို ထိထိရောက်ရောက် သတင်းပေးပို့နိုင်အောင် ကျနော်တို့ကို အထောက်အကူ ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာပြည်တွင်းကနေ သတင်းပေးပို့နေတဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့ ဧရာဝတီ သတင်းထောက်တွေ၊ နယ်စပ်ဒေသတွေကနေ သတင်းယူခဲ့ကြရတဲ့ သတင်းထောက်တွေနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်အခြေစိုက် သတင်းခန်းတွင်းက သတင်းထောက်တွေရဲ့ မနားမနေကြိုးပမ်း အားထုတ်မှုကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာလမှာ ဧရာဝတီရဲ့ အင်တာနက်စာမျက်နှာကို ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့ အကြိမ်အရေ အတွက်ဟာ သန်းပေါင်း ၁၂၀ အထိ မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ လွန်ခဲ့တဲ့လတွေက ရရှိခဲ့တဲ့ သန်း ၉၀ ထက်စာရင် အမြင့်ဆုံး ရောက်ခဲ့တာပါ။
တပြိုင်တည်းမှာပဲ တခြားမြန်မာသတင်းဌာနတွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ဧရာဝတီဟာ သတင်းပေးပို့မှု နယ်ပယ်ကို ချဲ့ထွင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ သုံးသပ်ချက်တွေကို ပြည်တွင်းက သန်းနဲ့ချီတဲ့မြန်မာပြည်သူထံ ပေးပို့နိုင်ဖို့အတွက် ၀ါရှင်တန် အခြေစိုက် လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံ (RFA) မြန်မာဌာနမှတဆင့် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အပတ်စဉ် ဧရာဝတီစကားဝိုင်းကို မတ်လမှာ စတင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့သလို နော်ဝေးနိုင်ငံ အော်စလိုမြို့မှာအခြေစိုက်တဲ့ ဒီမိုကရက်တစ် မြန်မာ့အသံ (DVB) ရဲ့ ရုပ်မြင်သံကြား အစီအစဉ်ကတဆင့် အပတ်စဉ် ဧရာဝတီစကားဝိုင်းကို အောက်တိုဘာလက စတင်ပြီး ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီလို ဧရာဝတီရဲ့ တိုးချဲ့ အစီအစဉ်သစ်တွေနဲ့အတူ စိန်ခေါ်ချက်အသစ်တွေလည်း ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ကျနော်တို့ စာဖတ် ပရိသတ်တွေဆီက တချို့ စိန်ခေါ်ချက်တွေ တိုက်ရိုက်လာတာရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ကို ထောက်ပံ့ကူညီနေတဲ့ တချို့ အလှူရှင်တွေအပါအ၀င် စာဖတ်သူတွေဆီက အကြီးမားဆုံးရရှိတဲ့ စိန်ခေါ်ချက်တခုကတော့ ဧရာဝတီက ရွေးကောက်ပွဲကို ထောက်ခံတာလား၊ ဆန့်ကျင်တာလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းပါပဲ။
ဒီမေးခွန်းဟာ ဖြေရလွယ်ကူလှတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ တဖက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်တဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေအသစ်အရ ပါတီကို မှတ်ပုံပြန် မတင်ဘူး၊ ရွေးကောက်ပွဲ မ၀င်ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာကို သုံးသပ်ဝေဖန်တဲ့ အယ်ဒီတာ့အာဘော်တွေ၊ ဆောင်းပါးတွေကို ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ အခြားတဖက်မှာလည်း ရွေးကောက်ပွဲကို ထောက်ခံတဲ့ ပါတီတခုနဲ့ စစ်အစိုးရနဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ပါ အငြင်းပွားစရာ ဆက်ဆံရေးရှိနေတဲ့ လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတခုအကြား ငွေကြေးဆိုင်ရာ အရှုပ်အထွေးတွေကိုလည်း ထုတ်ဖော်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ပြင်ပမှာအခြေစိုက်တဲ့ ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်တာဟာ ဘယ်လောက် ထိရောက်မှုရှိမလဲလို့ မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပြီး အသစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေအကြောင်း အများအပြား သတင်းရေးသား ပေးပို့ခဲ့တဲ့အတွက် ဧရာဝတီဟာ ရွေးကောက်ပွဲကို ထောက်ခံသူအဖြစ် တံဆိပ်ကပ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ စစ်အစိုးရခန့်အပ်တဲ့ ရွေးကောက် ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်တွေ အကောင်အထည်ဖော်တဲ့နေရာမှာ မမျှတမှုတွေနဲ့ စစ်အစိုးရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ မသမာမှုတွေကို အလေးထား ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတွက်လည်း ဧရာဝတီဟာ ရွေးကောက်ပွဲကို ဆန့်ကျင်သူအဖြစ် ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။
ကျနော်တို့ဘက်က အရိုးရှင်းဆုံးပေးချင်တဲ့ အဖြေကတော့ ကျနော်တို့ဟာ ရွေးကောက်ပွဲကို ထောက်ခံသူတွေမဟုတ်သလို ဆန့်ကျင်သူတွေလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ရဲ့ဦးတည်ချက်က သတင်းတွေကို အချိန်နဲ့တပြေးညီ တိတိကျကျနဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရေးသားပေးပို့ဖို့ပါပဲ။ ဒါ့အပြင် ဧရာဝတီရဲ့ အတွေးအမြင်ကဏ္ဍကိုလည်း အမြင်သဘောထား မတူညီတဲ့ ဘက်နှစ်ဘက်စလုံးက အယူအဆတွေကို ဖော်ပြပေးတဲ့ ဖိုရမ်တခုအဖြစ် အမြဲဖွင့်ပေးထားခဲ့ပါတယ်။
အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရပ်တွေ ပေါ်ပေါက်လာတိုင်း ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ တခြားသတင်းဌာနတွေလိုပဲ ဧရာဝတီမှာလည်း ကိုယ်ပိုင် အယ်ဒီတာ့မူဝါဒ ရပ်တည်ချက်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုကိစ္စမှာတော့ အဖြူအမည်း ကွဲကွဲပြားပြားရပ်တည်ဖို့ ကျနော်တို့ မရွေးချယ်ခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီအစား ရွေးကောက်ပွဲကို ထောက်ခံသင့်သလား သို့မဟုတ် ဆန့်ကျင်သင့်သလားဆိုတာကို ကျနော်တို့ စာဖတ်သူတွေ သူတို့ကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်ကြပါစေ။
ဒါပေမယ့် အခုအချိန်မှာတော့ မြင်ကွင်းကလည်း ကြည်ကြည်လင်လင် ဖြစ်လာပါပြီ။ ရွေးကောက်ပွဲကို “နိုး” လို့ ပြောခဲ့ကြသူတွေ မှန်တယ်လို့ ကြည့်မြင်ဖို့ ပိုပြီးလွယ်ကူလာပါပြီ။ ရွေးကောက်ပွဲဟာ မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုသွားနေတဲ့ အဆင့်တခုလို့ဆိုခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတကာကရော ပြည်တွင်းကပါ မြန်မာ့အရေး ကျွမ်းကျင်သူများဆိုသူတွေရဲ့ သဘောထားအမြင်တွေကို လက်ခံကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ဆုံး မျှမျှတတ သုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့ သူတို့ခန့်အပ်ခဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ ပြောစကားနဲ့ အလုပ်တွေကိုကြည့်ရင် ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာ မြန်မာပြည်ရဲ့ နိုင်ငံရေးမျက်နှာစာကို ထူးထူးခြားခြား ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ခြင်း မရှိပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ဒီရွေးကောက်ပွဲရလဒ်အဖြစ် ရှေ့လာမယ့်နှစ်မှာ တိုင်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေး အခြေခံအဆောက်အအုံပိုင်းဆိုင်ရာ အပြောင်းအလဲတခုကို မြန်မာပြည်သူတွေ သေချာပေါက် တွေ့မြင်ရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအပြောင်းအလဲဟာ ထူးခြားတယ်လို့ မြင်တယ်ဆိုရင်တောင် ရွေးကောက်ပွဲမှာ အဓိက အတိုက်အခံ ဒီမိုကရေစီပါတီတွေ မပါဝင်ခဲ့တာရယ်၊ အပစ်အခက်ရပ်စဲထားတဲ့ လက်နက်ကိုင်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေရော မရပ်စဲထားတဲ့ အဖွဲ့တွေကိုရော မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ ပါဝင်ခွင့်မရအောင် ဆက်လက် ဖယ်ကျဉ်ထားတဲ့အချက်ရယ်က ရှေ့လာမယ့် လတွေ နှစ်တွေမှာ စစ်မှန်တဲ့ တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုကို မြင်တွေ့ရဖို ခက်ခဲပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဘာတွေဖြစ်လာဖြစ်လာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်ကတော့ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ နှစ်တနှစ်ပါပဲ။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်က သင်ခန်းစာကို နမူနာယူရင်း အနာဂတ်ဟာ ဘာတွေကိုပဲ ဆောင်ကျဉ်းပေးလာ ပေးလာ ကျနော်တို့ရဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်ကို အချိန်နဲ့တပြေးညီ သတင်းပေးပို့နိုင်ဖို့ ဧရာဝတီဟာ အရင်ကထက် ပိုလို့အဆင့်သင်ဖြစ်နေပါတယ်။
ထက်အောင်သည် ဧရာဝတီမဂ္ဂဇင်း၏ ရွေးကောက်ပွဲစာမျက်နှာ တာဝန်ခံ ဖြစ်ပါသည်။
This entry was posted on December 30, 2010 at 1:23 pm and is filed under ဆောင်းပါး, ဖြန့်ဝေခြင်း.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.